Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.4.1 eBird
eBird birders မှငှကျတို့အပေါ်ဒေတာစုဆောင်း; စေတနာ့ဝန်ထမ်းမရှိသုတေသနအဖွဲ့ကိုက်ညီနိုငျသောပထဝီစကေးပေးနိုင်ပါသည်။
Birds ဂိမ်းနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ornithologists တိုင်းငှက်တိုင်းယခုအချိန်တွင်သည်အဘယ်မှာရှိကိုသိရန်လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစုံလင်သော Datasets ပေး ornithologists သူတို့၏လယ်ကိုများစွာသောအခြေခံမေးခွန်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ၏သင်တန်း, ဒီဒေတာကိုစုဆောင်းမဆိုအထူးသဖြင့်သုတေသီများ၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ornithologists ချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးပြီးပြည့်စုံ data ကိုအလိုရှိသောကြောင့်တစ်ချိန်တည်း, "birders" -people မှာပျော်စရာ-ကြသည်အဆက်မပြတ်ငှက်တို့သည်လေ့လာသူတို့ကမြင်သောအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ဘို့စောင့်ကြည့်ငှက်သှားတဲ့သူ။ ဤရွေ့ကားလူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုပူးပေါင်းရှည်လျားသောသမိုင်းများရှိသော်လည်း, ယခုတွင်ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြပြီ။ eBird ကမ္ဘာတဝှမ်း birders ထံမှသတင်းအချက်အလက်များတောင်းဆိုခင်းတစ်ခုဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းနှင့်ပြီးသား 250,000 သင်တန်းသားများမှသန်း 260 ကျော်ငှက်တွေ့နေရလက်ခံရရှိခဲ့သည် (Kelling et al. 2015) ။
မတိုင်မီက eBird ၏ပစ်လွှတ်ရန်, birders အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒေတာများတာသုတေသီများမှမရရှိနိုင်ခဲ့:
"ကမ္ဘာတဝှမ်းခနျးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခုနှစ်တွင်ယနေ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့မှတ်စုစာအုပ်, အညွှန်းကိန်းကတ်များ, မှတ်ချက်တွေစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ဒိုငျယာရီနှင့်အိပ်ကြ၏။ Bird အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကောင်းစွာ 'ငါ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ငှက်မှတ်တမ်းများ' 'အကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါကြားနာများ၏မကျေနပ်မှုကိုသိကျနော်တို့သူတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ငါသိ၏။ ဝမ်းနည်းစရာ, ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမသုံးနိုင်ငါသိ၏။ " (Fitzpatrick et al. 2002)
အဲဒီအစားဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေတာအသုံးမပြုတဲ့ထိုင်ရှိခြင်းထက်, eBird ဗဟို, ဒီဂျစ်တယ်ဒေတာဘေ့စဖို့က upload မှ birders နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း, အခါဘာမျိုးစိတ်မည်မျှနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု: eBird ထံ upload Data ကိုခြောက်ခု key ကိုလယ်ကွင်းများပါရှိသည်။ Non-Bird စာဖတ်သူများအဘို့, "ကြိုးစားအားထုတ်မှု" လေ့လာတွေ့ရှိချက်အောင်စဉ်အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒေတာကိုရညျအသှေးစစ်ဆေးမှုများကိုဒေတာ upload ပြုလုပ်မီကပင်စတင်။ ဒါမှမဟုတ်ရာသီထဲကပုံမှန်မဟုတ်သောအစီရင်ခံစာများ-ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ရှားပါးမျိုးစိတ်အစီရင်ခံစာများ, အလွန်မြင့်မားရေတွက်အဖြစ်တင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေ Birders အလံနှင့် website ကိုအလိုအလြောကျထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုအစီရင်ခံစာများ-ကြသည်။ ဒီအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပြီးနောက်, အလံအစီရင်ခံစာများနောက်ထပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဒေသဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရာပေါင်းများစွာ၏တဦးတည်းမှပို့ကြသည်။ ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်သူ-အပါအဝင် birder-The အလံအစီရင်ခံစာများဖြစ်စေစိတ်မချရအဖြစ်စွန့်ပစ်နေကြသည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ eBird ဒေတာဘေ့စထဲသို့ဝင်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေနောက်ထပ်စာပေးစာယူသဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် (Kelling et al. 2012) ။ ပြလေ့လာတွေ့ရှိချက်၏ဤဒေတာဘေ့စပြီးတော့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူလောကရှိမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ဖန်ဆင်းသည်, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ 100 နီးပါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပမြေားအသုံးပြုခဲ့ကြ (Bonney et al. 2014) ။ eBird ရှင်းလင်းစွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း birders ကိုမှန်ကန် ornithology သုတေသနအတွက်အသုံးဝင်သောကြောင်းဒေတာစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
eBird ၏အလှအပတစ်ခုမှာကြောင့်ပြီးသားဖြစ်ပျက်-In သောဤအမှု, ငှက်များ "အလုပ်" ဖမ်းယူသည်။ ဒီ feature ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအောင်မြင်ရန်စီမံကိန်းကိုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် birders အားဖြင့်ပြုသောအမှုသည် "အလုပ်" ကိုအတိအကျ ornithologists အားဖြင့်လိုအပ်သောဒေတာများကိုမတိုက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, eBird အတွက်, ဒေတာစုဆောင်း birders ၏တည်နေရာမငှကျတို့၏တည်နေရာအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီဥပမာအဘို့, အရှိဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်လမ်းများနှင့်နီးစပ်သောပေါ်ပေါက်လေ့, ဆိုလိုသည် (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) ။ အာကာသကျော်အားထုတ်မှု၏ဤညီမျှမှုဖြန့်ဖြူးဖို့အပြင်, birders ဖြင့်အမှန်တကယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစဉ်အမြဲစံပြမရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သော birders သာသူတို့အစားသူတို့လေ့လာသမျှသောမျိုးစိတ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကို upload ထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမျိုးစိတ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက် upload ။
eBird သုတေသီများသည်ဤဒေတာရဲ့အရည်အသွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှစ်ခုအဓိကဖြေရှင်းချက်များစွာသောအခြားဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများတွင်ပေါ်ထွန်းတော်ကြောင်းကိစ္စများရှိသည်။ ပထမဦးစွာ eBird သုတေသီများအဆက်မပြတ် birders ကတင်ပြသောအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, eBird သင်တန်းသားများပညာရေးကမ်းလှမ်းနှင့်ကသူတို့ဒီဇိုင်းအသုံးပြုပုံ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်မဟုတ်, သူတို့ကလေ့လာတွေ့ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်မျိုးစိတ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက် upload မှ birders အားပေး, ထိုအသီးအသီးပါဝင်သူရဲ့အချက်အလက်များ၏မြင်တွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးထားပါတယ် (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) ။ ဒုတိယအချက်မှာ eBird သုတေသီများကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များ၏ဆူညံနှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသဘာဝအဘို့ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားကြောင်းစာရင်းအင်းမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအစာရင်းအင်းမော်ဒယ်တွေအပြည့်အဝဒေတာမှဘက်လိုက်မှုကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့် ornithologists အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သကဲ့သို့, 100 နီးပါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သိပ္ပံနည်းကျစာပမြေားတှငျအသုံးပွုခဲ့, သောညှိပြီး eBird အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။
သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ eBird အကြောင်းကြားတဲ့အခါအများစုက Non-ornithologists ပိုင်းတွင်အလွန်သံသယဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်တွင်ဤသံသယ၏တစိတ်တပိုင်းမှားလမ်းအတွက် eBird စဉ်းစားမှလာ။ လူအတော်များများဟာပထမဦးဆုံး "လော eBird ဒေတာစုံလင်သောရှိ၏" ထင်နှင့်အဖြေကိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောထိုလက်ျာမေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ညာဘက်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် "အချို့သောသုတေသနမေးခွန်းများများအတွက်လက်ရှိ ornithology ဒေတာထက် eBird ဒေတာ သာ. ကောင်း၏?" ထိုမေးခွန်းကိုများအတွက်အကျိုးစီးပွားမေးခှနျးမြားစှာအတှကျဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းဖို့မလက်တွေ့ကျကျအခြားရွေးချယ်စရာမရှိသောကွောငျ့အဖြေကိုကျိန်းသေဟုတ်ကဲ့, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌ရှိ၏။
အဆိုပါ eBird စီမံကိန်းအတွက်ကအရေးကြီးသောသိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းမှုအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ သို့သော် eBird, နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ, နမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ကြကြောင်းညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့လာမယ့်အပိုင်းထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်အတိုင်း, သို့သော်, လိမ္မာပါးနပ်သောဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာနှင့်အတူဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအချို့ setting တွင်အနည်းဆုံးနိုင်ပါသည်။